BariatricPal Chitoro: Chengetedza Mari pane Bariatric Chikafu, Vitamin & Nutrients
MAPUROTINI & CHikafu
Poda & Shakes
BariatricPal Mapuroteni One
Mhando dzakasiyana & Sampler Packs
Bhokisi reMwedzi Kirabhu
Hot & Cold Kudya kwemangwanani
Lunch & Kudya
Chingwa, Bagels, Buns & Kuputira
Pasita & maNoodles
Mapuroteni Snacks & Desserts
Chokoreti Mabhawa & Mahwipi
Makeke, Cookies & Wafers
Kubheka & Keke Misanganiswa
Nyama & Jerky Snacks
Nut & Fruit Zvikafu zvishoma
Zvibereko Jam & Jellies
Yakaomeswa Riced Miriwo
Chikafu cheGungwa Chikafu
Detox & Chenesa
Bvudzi, Ganda & Zvipikiri
Zvakakosha Fatty Acids
Pemberera Vitamin Packs
ProCare Hutano Vitamin Packs
Bariatric Kubatsira Vitamin Packs
Bariatric Vitamin Nongedzo
Acid Yemahara Kofi
Mwoyo yePalm Pasta
Mabhuku & DVD's
Chikamu Chokudzora Maturusi
WLS Kadhi Yekudyira
Mapuroteni Musanganisi & Blender
Piritsi & Vitamin Varongi
Alex's Acid-Yemahara Kofi
Asher Chokoreti Co.
Dhivha Bhawa Chikafu
Idya Me Kuzvipa Mhosva
Shuga yeEda Yemahara
Yakawedzera Chena Goridhe
Makumi makumi mashanu Zvekudya
Yakakura Yakadzika Carb Chingwa Co.
Hank Protein Uye
Keto uye Co
Keto Mambokadzi Kreations
Tsvoda Keto Yangu
Kicheni Tafura Yevabiki
Ziva Brainer Chikafu
Lolli's Cookie Masumbu
Mapuroteni angu Anoruma
Changu Vitamin Patch
Zvigadzirwa zvinovaka muviri
Nguruve Mambo Akanaka
Kubvarura Van Wafels
Slim uye Trim Snacks
Smart Kubheka Co.
Snack House Inotutumadza
Twin Peaks Zvikamu
Youtopia Zvikafu zvishoma
ZVOKUTSVIRA, ZVIDZIDZO ZVEKUDYA & KUDYA
Zvirongwa zveBariatric Kudya
Yakachena Zvikafu Kudya
Kudya Kwakasimba Kudya
Homwe Reset Chirongwa
48-Hour Homwe Reset Chirongwa
2-Vhiki homwe Reset Kudya
Rasa maPondo gumi muPiri Mavhiki Chirongwa
"3 Mazuva ese" Kudya Chirongwa cheKuchengetedza
"6 Mazuva ese" Kudya Chirongwa cheKudzikama Kuonda
Bariatric Kudya Matipi
Kudya Kune hutano Matipi
Hutano Kudya kwemangwanani Pfungwa
Hutano hweMasikati neDinner Pfungwa
Kudya uye Snack Mazano
150 Bariatric Recipe Pfungwa!
Dips, Sauces & Zvinokanganisa
Yakagadzirirwa varwere vebariatric, vakagwinya kune wese munhu!
Zvese zvaunoda pane yako
Hutano Bariatric Mararamiro
Bariatric Mavhithamini, Supplements & Minerals Bariatric Mavhithamini
Bariatric Yakakwira Protein & Yakadzika Calorie Zvikafu zvishoma uye Desserts Bariatric Snacks
Bariatric Mapuroteni Kudya Bariatric Mapuroteni Kudya
Bariatric Mapuroteni Poda & Shakes Bariatric Mapuroteni Poda & Shakes
Karusiyamu Citrate Chews
Kutora calcium yako nemaprobiotic izvozvi zvinogona kuve chikamu chaunofarira chezuva rako kana ukashandisa BariatricPal Calcium Citrate Chews ine Probiotic. Kutora calcium yako neprobiotic zvakangofanana nekudya inotapira, inotapira, asi uine zvakakosha muviri uye usingakuvadze chiuno chako.
Nezve chete POSHI zviri nyore & zvinodhura BariatricPal Multivitamin CHIMWE zuva rimwe nerimwe, iwe unogona kuwana bariatric mavitamini uye mamineral aunoda kuti ugare uine hutano! BariatricPal Multivitamin CHIMWE yakagadzirirwa uye kuvandudzwa nechikwata chenyika chinotungamira Bariatric nyanzvi dzezvekurapa.
Izvi zvinonaka-zvinodzungudza zvinogona kukubatsira kutema macalorie uye carbs uye kurasikirwa nehuremu hwakawanda. Musanganiswa wavo wakasarudzika unopa 27 gramu epamusoro-soro whey protein, 28 yakakosha mavhitaminzi uye zvicherwa, karusiyamu, dare uye 5 magiramu e fiber. Inokurumidza uye nyore kuitira kuti ugone kuwana zvinovaka muviri uye chinonaka kurapwa chero kupi!
Vitamin zvigamba zvimiro bariatric vhitamini yekuwedzera zvigamba iwe pfeka paganda. Vanokubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako zvehutano zvaunoda. Vitamin zvigamba zvevarari vebariatric zvinoburitsa zvakakosha zvinovaka muviri kana zvichishandiswa paganda kudarika iyo yekugaya system izvo zvinokanganisa kana kuomesa mavitamini emuromo vasati vasvika muropa.
BariatricPal Kunyorera Bhokisi
Iwe unoda here kuwana kushamisika mune tsamba? Wakagadzirira here kuwana rubatsiro kurasikirwa uremu, kuwedzera mapuroteni ako, uye kuchengetedza kudya kwako kunakidze uye kunakidze? Iwe uri fan of kwakakura kunaka, chikafu chiri nyore, uye tudyo, uye zvakasarudzika zvaderedzwa? Ndokunge, iyo BariatricPal Bhokisi reMwedzi Kirabhu. Mwedzi wega wega, nhengo dzinogashira yakasarudzika bundle yezvigadzirwa zvezvitoro uye sampuli Hapana masumbu emwedzi miviri akafanana. Mwedzi wega wega, zvinhu zviri muhomwe yako zvakanyatso kusarudzwa nemaoko nevezvitoro vedu nyanzvi kuti iwe unakirwe.
Zviri kuitika iye zvino:
- Kay Aka Peya
- Becca Iyo gastric Chef
BariatricPal Mibairo Mitezo Nhengo Dzinowana Zvakawanda Kunze Kwekutenga Kwavo
Pese paunotenga, unowana mapoinzi. Iwe unowana 1 poindi pamadhora 1.00 aunoshandisa paiyo BariatricPal Chitoro. Tora mazana mana ($ 400) pese paunotarisa shamwari! Iwe zvakare unowana mapoinzi kungo gadzira account. Tora mabhonasi ekutitevera isu paTwitter, Instagram uye FaceBook.
KUTENGA KWEMAHARA PAMADZIDZO ANODarika $ 79
100% KUGutsikana kunovimbiswa
ZVESE ZVEMAOKO UNOZIVA UYE WOTENDA
TARIRA-A-SHAMWARI KUTI UDZIDZE MAZANO!
Sainira UP kune ZVIMWE ZVIPO
Nyorera & Chengetedza!
* Aya mazwi haana kuongororwa neKudya neDrug Administration. Ichi chigadzirwa hachiitirwe kuongorora, kurapa, kuporesa kana kudzivirira chero chirwere.